နေအပူချိန် မြင့်တက်မှုများကြောင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကျေးရွာအချို့ ၌ သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ - Yangon Media Group
နေအပူချိန် မြင့်တက်မှုများကြောင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကျေးရွာအချို့ ၌ သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ
မကွေး၊ မေ ၁
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၌ နေအပူချိန်မြင့်တက်နေမှု တွေကြောင့် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကျေးရွာအချို့၌ သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်နေသဖြင့် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေကြရကြောင်း ကျေးရွာ နေပြည်သူများထံမှသိရသည်။ အဆိုပါ ရေပြတ်လပ်နေသည့် ကျေးရွာများမှာ ကန်ရေကိုသာ အဓိကထားသုံးစွဲနေကြရပြီး ကျေးရွာအချို့မှာ စက်ရေတွင်းများရှိ သော်လည်း ရေထွက်အားနည်း သည့်အတွက် ရေအခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့နေခြင်းဖြစ်သည်။
”နွေရာသီနေအပူရှိန်ပြင်းတဲ့အတွက် ရေပြတ်လပ်မှုကြုံတွေ့နေ ရတဲ့နေရာတွေက ကျေးရွာတွေက နေ ခွဲထွက်နေထိုင်ပြီး ရေကန်တွေကို မှီခိုနေကာ သောက်သုံးရေသုံးတဲ့ တဲတိုက်တွေက အဖြစ်များပါတယ်”ဟု တိုင်းဒေသကြီး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီး ဌာန တိုင်းဦးစီးမှူး ဦးမျိုးအောင်က ပြောသည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း နတ်မောက်၊ ချောက်၊ မြို့သစ်၊ မင်းလှနှင့်မကွေးမြို့နယ်များ၌ ရေရှား ပါးမှုကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်ပြီး ရေရှားပါးသည့် နေရာများမှာ စီးပွား ရေးအရ ကျေးရွာများမှ ခွဲထွက် နေထိုင်သည့် တဲတိုက်နေရာများ ဖြစ်သည်။
”ကျေးရွာတွေမှာ အခုလိုပူ ပြင်းတဲ့အချိန် ဧပြီလဟာ ရေအခက်အခဲအဖြစ်ဆုံးလဖြစ်ပါတယ်။ မိုးဦးကျပြီးရင်လည်း စမ်းရေသွားခပ်ရာမှာ အခက်အခဲတွေရှိနေဆဲပါ”ဟု ကြာကန်ကျေးရွာတဲတိုက် နေသူတစ်ဦးကပြောကြားသည်။ ယခုနှစ်နွေရာသီတွင် ကျေးရွာ ၃ဝ ကျော်၌ ရေရှားပါးမှုဖြစ် ပေါ်လာနိုင်သည့်အတွက် တိုင်း ဒေသကြီး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ကျေးရွာအချို့သို့ သွားရောက်၍ ရေလှူဒါန်းမှုများ ဆောင်ရွက်ပေး နေသည့်အပြင် ရေအခက်အခဲကြုံ တွေ့နေရသည့် ကျေးရွာများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီကူညီနိုင်ရန် အတွက် တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦး စီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၏ ဖုန်း နံပါတ်များဖြန့်ဝေပေးထားကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာမြေ ချစ်သူများမှ ပုသိမ်မြို့ ရှိ နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းနှင့် ခြံပြင်ပများ၌ အရိပ်ရအပင်မျာ
နတ်မတောင်သို့ ၂ဝ၁၈ ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရီးသွားဧည့်သည် စံချိန်တင် လာရောက်သော်လည်း ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဧပြ?
ကလေးမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ရင်ချင်းဆက် အမြွှာ မိန်းကလေးနှစ်ဦးကို ပထမဆုံးအကြိမ် အောင်မြင်?
ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကားလမ်းနှင့် မီးရထားလမ်းများ ဖောက်လုပ်မည်
ဒန့်သလွန်သီး ထုတ်ကုန်များ ဝယ်ယူရောင်းချမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် သင်္ကြန်နောက်?
ပြိုင်ဘက်ကို တံတွေးဖြင့် ထွေးခဲ့သော ဒေါက်ဂလပ်စ်ကော်စတာ လေးပွဲ ပယ်ခံရမည်